Kunqande ukubanjwa ngabathinjwa | Martech Zone
Kunqande ukubanjwa ngokuHanjiswa ziiArhente
NgoLwesihlanu, Februwari 5, 2016 NgoLwesihlanu, Februwari 5, 2016 Douglas Karr
Ukuba ngumnini wearhente yam kukuvula amehlo kwinto eyenzeka kwishishini… kwaye ayintle. Andifuni ukuba le post ibe yiarhente etshitshisa iposti kuba ndivelana neearhente ezininzi kunye nezigqibo ezinzima ekufuneka bezenzile. Ukuqala kwam, ndandicinga ukuba andifuni ukuba ukuba Iarhente- yenye yezo arhente ezenza igama labathengi kunye nelokufiphala kwabaxhasi, zityhalelwa ukuzithengisa yonke imihla, zilumkele kwaye zitshintshe, okanye zibize ngaphezulu kumgcini xa zijija.
Sinesivumelwano esivulekileyo esenza ukuba abathengi bahambe xa befuna, kodwa ibuyiselwe kuthi nathi-amaxesha amaninzi. Endaweni yokuba isetyenziswe njengendawo yokuphuma xa izinto bezingasebenzi, sinabaxhasi abaliqela ababhalise phantsi kwenkqubo yethu yereyithi ethe tyaba, tyhala ngobundlongondlongo ukuze ufumane umsebenzi omninzi kunokuba besithembisile, emva koko uyeke ukunqanda ukuwuhlawulela ezantsi kwendlela. Oko kusidla ixesha elininzi kunye nemali.
Oko kwathiwa, sisakucaphukela ukufumana ii-imeyile ezinje:
Oku kubangela iingxaki ezimbini ezinkulu. Okokuqala, umthengi ngoku uphelelwe yimali kwaye uxhomekeke kwiarhente abayichithe nohlahlo-lwabiwo mali. Okwesibini, umxhasi ngoku ucaphukile yi-arhente, kwaye amathuba ezinto ajike angalunganga. Oko kuthetha ukuba banokufuna ukuhamba bemke baqalele phantsi. Inkqubo ebizayo abanokungakwazi ukuyifumana.
Kuxhomekeke kwisivumelwano kunye ne-arhente, iarhente inokuba ilungile. Mhlawumbi iarhente ibeka itoni yomzamo kubukho bewebhu kwaye isebenza kwikhontrakthi apho umthengi ehlawula khona kwisicwangciso sezavenge. Indawo inokuthatha ixesha ukuba ibekwe kakuhle (nangona ndiyamangaliswa ngumcebisi we-SEO oza kuthatha abathengi abakhuphisanayo). Isenokungabi yimeko yokuthinjwa konke konke.
Ukuba ucinga ukuba iarhente ayilunganga nokuba ungathini, ungafuna ukujonga izivumelwano zakho. Njengomzekelo, ukuba sikhupha oopopayi kwi-arhente, mhlawumbi siza kubuyisela ividiyo kwakhona. Uninzi lwearhente alunikezeli ngefayile emva kweZiphumo ngaphandle kokuba loo yinxalenye yesivumelwano. Ukuba ufuna ukuhlela ukuhlela oopopayi, kuya kufuneka ubuyele kwi-arhente yomthombo kwaye ufumane enye ikhontrakthi endaweni.
Ungayiphepha njani imeko yeArhente yokuHanjiswa
Kwintengiso yedijithali, singacebisa ukuba uhlale usiya kubudlelwane kunye nearhente yakho usazi oku kulandelayo:
Igama leSiza - ngubani igama lomnini? Uya kumangaliswa kukuba zingaphi iiarhente ezibhalisa igama lesizinda lomthengi, emva koko zigcine. Sisoloko senza ukuba abathengi bethu babhalise kwaye babe ngabanini beedomain.
ukusingatha -Ukuba unqumle amaqhina kunye nearhente yakho, kufuneka uyifudusele indawo yakho komnye umphathi okanye ungahlala nabo? Sisoloko sithenga ukubamba abathengi bethu, kodwa kuhlala njalo egameni labo ke ukuba bayasishiya, banokususa ukufikelela kwethu.
Iimpahla ezingafunekiyo -Iifayile zoyilo ezinjenge-Photoshop, i-Illustrator, i-After Effects, iKhowudi kunye nezinye izixhobo ezisetyenziselwa ukwenza ezinye iziphumo zeendaba zihlala ziyipropathi ye-arhente ngaphandle kokuba uxoxisane ngenye indlela. Xa siphuhlisa i-infographics, umzekelo, sibuyisela iifayile ze-Illustrator ukuze abathengi bethu bakwazi ukuzibuyisela kwakhona kwaye bandise ixabiso lazo. Uya kumangaliswa kukuba bangaphi, nangona kunjalo.
Thenga xa kuthelekiswa nokuqeshisa
Yonke le nto ixhomekeke ekubeni uyathenga kwaye ungumnikazi wamalungelo kuyo yonke into eyenzelwa yiarhente yakho, okanye ukuba bayawagcina amanye amalungelo emsebenzini abawenzayo. Thina rhoqo yenze icace le nto nakubathengi bethu. Sivelise izisombululo ezimbalwa kunye nabathengi apho sigcine khona iindleko ziphantsi ngokuthetha-thethana ngekhontrakthi apho besiphethe iiasethi khona. Oko kuthetha ukuba singazisebenzisa kwakhona kwabanye abathengi ukuba sifuna njalo. Umzekelo yi indawo yokugcina indawo sakha kwiminyaka eyadlulayo sisebenzisa iimephu zikaGoogle.
Ukuthetha ngokwasemthethweni kunokuba nzima ukuba kufundwe ngaphakathi kwesivumelwano somgangatho wobungcali ke qiniseka ukuba uyazi. Indlela elula kukubuza nje:
Kwenzeka ntoni xa siphelisa ubudlelwane bethu beshishini? Ngaba yeyam okanye yeyakho?
Ukuba sifuna ukuhlela emva kokuba siphelisile ubudlelwane bethu beshishini, iyakwenzeka njani loo nto?
Andikutyhaleli kweli nqaku ekufuneka ulenzile rhoqo thethana ngobunini kwiarhente. Rhoqo, unokufumana amaxabiso okhuphiswano kakhulu kwiiarhente kuba sele bewenzile umhlaba kwaye banempahla kunye nezixhobo zokwenza imisebenzi. Oku kungaphezulu kwe- qeshiso or isitofu Isivumelwano kwaye sinokusebenzela inzuzo yakho ukuba unqwenela ukugcina imali.
Umzekelo, singathengisa ixabiso elipheleleyo lesiza esipheleleyo kunye nawo onke amajelo eendaba nge- $ 60k kodwa sithethathethane nge- $ 5k ngenyanga ngezavenge. Izibonelelo zabathengi ngokufumana indawo ngokukhawuleza ngaphandle kokuhlawula yonke imali ngaphambili. Kodwa iarhente iyaxhamla kuba njengoko unyaka uhamba, banomsinga wengeniso ongaguquguqukiyo. Ukuba umthengi uthatha isigqibo sokuyinqumlela ikhontrakthi ibe yeyokungagqibeki, banokulahleka iiasethi kunye nayo. Okanye mhlawumbi banokuxoxisana ngesixa semali ukuze bathenge iiasethi.
Sisebenza namagqwetha ethu ngoku ekuchazeni ngcono lo mnikelo wabathengi. Singanikezela ngezivumelwano ezintathu ezahlukeneyo, kubandakanya ukubonisana okumsulwa ngaphandle kweasethi, ukwenziwa apho sigcina amalungelo omsebenzi kwinqanaba eliphantsi, kunye nokwenza apho abathengi bethu bagcina amalungelo omsebenzi kwinqanaba eliphezulu.
Ngale ndlela, iinkampani ezikholelwa ekubeni sinokufumana amaxabiso aphezulu kakhulu zingasebenza nathi ngexabiso eliphantsi… kodwa ukuba siyaphumelela, kwaye banqwenela siqu amalungelo emsebenzini, kuya kufuneka bathethathethane ngokuthenga kuthi. Okanye banokushiya nje, kwaye siyawugcina umsebenzi ukuze sikwazi ukuwubuyisela komnye umthengi.
tags: Nkonzoisivumelwano searhenteIzivumelwano zearhenteIingxoxo zearhenteisivumelwanoukuthinjwa
IWittyParrot: Ulwazi oluzenzekelayo kwiiNtengiso kunye noNxibelelwano lweNtengiso
Amanyathelo ama-3 okuQala uMkhankaso weNtengiso yeVidiyo yeShishini